“Inter waxay dooneysaa Semi-final ka Champions League.”.- Thohir – Gool FM
“Inter waxay dooneysaa Semi-final ka Champions League.”.- Thohir
Byare May 22, 2018
(Italy) 22 Maajo 2018. Inter ayaa Todobo Sano kaddib axadii dib ugu soo laabatay Champions League kaddib ciyaar waali ahayd oo ay 3-2 uga adkaadeen Lazio oo ay booska isku heysteen.
Madaxwaynaha kooxda Erick Thohir ayaa ka dhawaajiyay in Inter ay durba dooneyso inay gaarto semi final ka koobka Dhaga wayanaha.
“Yoolku wuxuu ahaa in shan sano gudahood aan ku soo laabano Champions League waana ku guuleysanay inaan sameyno midaa,” Thohir ayaa sidaa u sheegay republika.co.id.
“Iminka waxaan dooneynaa inaan gaarno semi-final ka, waxaan la duubnaan doonnaa Luciano Spalletti. Waxaan isku dayi doonaa inaan qancino rabitaankiisa aana ilaalino ciyartoyda lagama maarmaanka u ah isaga.
“Waan xoojin doonaa shaxda innagoo ku soo dareyna ciyaartooy, dabcana waana maal galin doonaa kooxda, Guusha inter waa inay heysato ciyaartoy, tababarayaal iyo maamelayaan kuwa oo wada leh hal aragti isla markaana wada shaqeeya.”.
Inter Milan oo wali ka quusan la’a in Barcelona ay ku qanciso inay ka iibiso Rafinha Alcântara
“Ma jiro xidig sameyn kara waxa uu Eden Hazard sameenayo”…. Mid ka mdi ah halyeeyada kooxda Chelsea